HomeTURKEYGobolka Marmara54 SakaryaDemirtaş wuxuu helay macluumaad ku saabsan tareenka qaranka horumarka
07 / 12 / 2019 54 Sakarya, tareenka, SAWIRADA, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
wasiir ku-xigeenka ayaa baaray demirtas soosaarka qaranka horuumar
Demirtaş wuxuu helay macluumaad ku saabsan tareenka qaranka horumarsan; Wasiir ku-xigeenka Deegaanka iyo Wasiirka Qorshaynta Urban taxane ah oo dhacdooyin booqasho Sakaryay Mujahid Demirtas wadahadalo la Turkey baabuur Industry Inc. (TÜVASAŞ) soo booqday.
Wajahadda booqashada dhexdeeda, Guddoomiyaha TÜVASA and iyo Maareeyaha Guud Prof.Dr. Dr. Wasiir ku xigeenka Demirhan ayaa la kulmay İlhan Kocaarslan iyo kooxdiisa waxayna heleen macluumaad ku saabsan soosaarka tareenka gudaha iyo ta qaran ee TÜVASAŞ. Later, wafdiga aagga warshadda, sets tareen caadiga ah iyo sare-xawaaraha aluminium lixaad qaba ayaa loo baahan yahay in xadiidka Turkey, metro iyo taraamka baabuurta yihiin macmalay la xarunta degmada iyo qaranka Rail Baabuurta Aluminum Body helay Production Factory ee imtixaanka u jeclaysteen in halka chat iyo Raaxada shaqaalaha Demirtas.
Kadib, Demirtaş wuxuu booqday gudaha tareenka qaranka, kaas oo sii waday wax soo saarkiisa oo muujiyay inuu ku faraxsan yahay daraasadaha wuxuuna ka tagay T leftVASAŞ.
Guddoomiyaha Gobolka Demirtaş ayaa ka warramay mareegaha gobolka ee TCDD Ooguz Saygılı
Beeralayda Macluumaad Dheeraad ah oo ku Saabsan Dhaqaajinta Bariga
Gawaarida Tareenka ee Qaranka